Andro: 14 Febroary 2020
Nandritra ny komity mpikarama momba ny varotra séktorika nokarakarain'ny Bursa Chamber of Commerce and Industry mba hampitomboana ny fanondranana orinasa, ny fijanonana vaovao dia i Meksika, ny toekarena faha-15 lehibe indrindra eto an-tany. BTSO ao amin'ny fikambanana nokarakaraina ho an'ny sehatry ny milina [More ...]
Ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) Railway Railway Train mpandraharaha sy mpitantana ny fikambanana fiarahamonim-pirenena tamin'ny 13.02.2020/3/XNUMX tao Ankara Train Station faritra ao amin'ny Hall XNUMX Behiç Ergun nivory tao amin'ny Consultatif fihaonana. [More ...]
Ny dingana vita amin'ny antontan-taratasy ho an'ny famerenana ny mpiasa amin'ny anaram-boninahitra isan-karazany izay hataon'ny Tale jeneralin'ny TCDD Tasimacilik dia vita. Tsindrio eto raha ny lisitr'ireo kandidà izay ny antontan-taratasiny izay raisina ho mety sy mendrika ny hanao fanadinana am-bava. [More ...]
Ny "Conformity and Certification Conference in Rail Systems" dia hotronin'ny Fikambanan'ny Rail Systems Association ny 28 Febroary 2020. Ity fihaonana ity dia hotanterahina ao amin'ny Ostim Conference Hall / Ankara mandritra ny 1 (iray) andro, takelaka 3 (telo) ary [More ...]
Hita avy amin'ireo angon-drakitra iraisam-pirenena ny fampihenana ny fifandimbiasan-tsaina sy ny asa fanitarana ny lalana izay napetraky ny Kaominin'i Bursa Metropolitan, izay mampihena ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Ao anatin'ny fikarohana ny orinasa monina any Holandy, izay manomana ny fitohanan'ny fifamoivoizana manerantany, 2018 [More ...]
IETT dia nanao sonia fifanarahana iray amin'ny Chamber of Mechanical Engineers ao anatin'ny fitrandrahana sy fanaraha-maso ireo bus-ny. Araka izany, ny valin'ireo fanontaniana ireo dia omen'ny andrim-panjakana tsy miankina ankoatry ny mpanadihady IETT sy orinasa mpiantoka ny fikojakojana. [More ...]
Ünal Karadağ, izay mpikambana ao amin'ny Fikambanana Amerikanina Mpiasa Misahana ny Fitaovam-pitaterana ary miasa amin'ny maha Depiote lefitra ao amin'ny TCDD Tale sy Lehibem-paritry ny serivisy sy ny mpitantana ny Station, sesitany any Malatya noho ny anarana hoe rotation. [More ...]
Mpikambana mpanamory fiaramanidina efa vita fanaraha-maso sy fiaramanidina fitantanana fiaramanidina dia haverina ao amin'ny Direction Générale de Forestry (OGM) an'ny Ministeran'ny fambolena sy ny ala. Raha ny fanambaràna navoaka tao amin'ny Gazety ofisialy ny Tale jeneralin'ny tale jeneraly momba ny ala (OGM) an'ny Ministeran'ny fambolena sy ny ala, [More ...]